“प्राधिकरणमा त्यस्तो कुनै ठाउँ पक्कै छ, जहाँबाट विद्युत् चुहिन्छ”— ऊर्जामन्त्री - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / कुराकानी / “प्राधिकरणमा त्यस्तो कुनै ठाउँ पक्कै छ, जहाँबाट विद्युत् चुहिन्छ”— ऊर्जामन्त्री
“प्राधिकरणमा त्यस्तो कुनै ठाउँ पक्कै छ, जहाँबाट विद्युत् चुहिन्छ”— ऊर्जामन्त्री
By Digital Khabar on December 19, 2016
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा वर्षौंदेखिको लोडसेडिङ हटेपछि आमजनता खुसी भएका कारण उत्साहित छन् । उनको प्राथमिकतामा यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुन:संरचना र ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरु छन् । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर शर्मासँग गरेको कुराकानी :
चार महिनामा लोडसेडिङ हटाउनेबाहेक के गर्नु भो ?
ऊर्जा क्षेत्रका केही समस्याबारे सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा पनि अवगत भएको थियो । त्यतिबेला विद्युत्को ‘डेडिकेटेड लाइन’का सम्बन्धमा उजुरी आएको थियो । जनतालाई अन्धकारमा राखेर व्यवसायीले तिर्न खोजेको मूल्यमा भन्दा पनि सस्तोमा बिजुली किन दिएको भनेर मैले प्रश्न पनि गरेको थिएँ । चमेलियालगायतका परियोजनाहरूको अध्ययनबाट ऊर्जा क्षेत्रका समस्याका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाएको थिएँ । यहाँ आइसकेपछि मैले तिनै समस्याहरूको गम्भीर अध्ययन गरेँ ।
कहाँ कहाँ रहेछन् त समस्या ?
पहिलो त संरचनाहरूको निर्माण सुरु गर्ने तर समयमा पूरा नगर्ने । जसले गर्दा विविध समस्या पैदा भएर स्थगित हुने गरेको पाइयो । दोस्रो, हामीसँग भएको विद्युत् ऊर्जाको सही सदुपयोग नभएको पाइयो । विद्युत् नै कतै हराइरहेको पाइयो । कहाँ र कसरी हराइरहेको छ ? त्यो त अध्ययन भइरहेको छ । तेस्रो कुरा काम गर्ने क्षेत्र अत्यन्त लापरबाही र लोभलालच बढी भएको पाइयो । यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर मैले ३७ बुँदे कार्ययोजना नै बनाएँ ।
अहिले लोडसेडिङ हटेको हो कि मौसमी अनुकूलता र आपूर्तिमा वृद्धि पनि कारण हो ?
यसलाई अर्को तरिकाले पनि हेर्नुपर्छ । गएकै साउनमा पनि लोडसेडिङ त थियो नि ! त्यतिबेला पर्याप्त वर्षा भएको थिएन र ? भदौको पहिलो सातासम्म पनि वर्षा थियो तर लोडसेडिङ त थियो । भनेपछि वर्षाले पानी बहावमा कति असर गर्‍यो/गरेन अर्को कुरा हो । त्यसबाट थोरै फरक पनि पर्ला । केही मेगावाट थपघट भएको होला । तर, साउनको महिनामा पानी नभएर त होइन । यसले त केही अव्यवस्था थियो भन्ने नै संकेत गर्छ ।
त्यो अव्यवस्था कसरी हटाउनुभयो त ?
त्यसका लागि दुईवटा उपाय अपनाएँ । पहिलो, म आएको केही दिनमै प्राधिकरणको बोर्डबाट सेवासुविधासम्बन्धी कर्मचारीका माग सम्बोधन गरियो । दोस्रो, मन्त्रालयमै गुनासो व्यवस्थापन एकाइ गठन गर्न लगाएँ । यी दुईको योगले केही हदसम्म सुधार भएको हो । अझै पूरा भएको छैन । काठमाडौँमा त राम्रै सुधार देखिएको छ । तर, बाहिर पनि सुधारको कदमलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले सुधारका यी पहलले राम्रै नतिजा दिएको छ र त्यसले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई उत्साही पनि बनाएको छ । गर्‍यो भने सुधार सम्भव छ भन्ने पनि देखाएको छ ।
विगतमा समस्या, अव्यवस्था र बेथिति थियो भने त्यसका दोषी पहिचान गर्ने र तिनलाई कारबाही गरिन्छ त ?
म दोषी भनेर व्यक्तिविशेषलाई आरोपित गर्न चाहन्नँ । त्यो गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन । कसलाई दोषी मान्ने ? हाम्रो संरचनाभित्र कहाँनेर त्रुटि थियो र त्यो त्रुटि नियतवश थियो, प्राविधिक थियो वा अज्ञानतावश थियो, त्यो पहिचान हुनुपर्छ पहिले । त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसको रिपोर्ट तयार गर्न लगाएको छु ।
कहिलेसम्म तयार होला त्यो ?
अहिले नै समय तोक्न नमिल्ला । छिट्टै मेरो हात पर्छ । कुनै व्यक्तिविशेषलाई कारबाही गर्न, आग्रह–पूर्वाग्रह राख्न भन्दा पनि सबैभन्दा पहिले तथ्य चाहिन्छ । जनताले नै मागिरहेका छन् यस्तो तथ्य, मैले जवाफ दिनुपर्छ । मन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले कहीँबाट ल्याएर दिएको होइन, बिजुली । त्यसैले तथ्य त चाहियो । त्यो तथ्य म बाहिर ल्याउँछु ।
कसैले नियतवश बदमासी गरेको रहेछ भने नि ?
प्राधिकरणमा त्यस्तो कुनै ठाउँ पक्कै छ, जहाँबाट विद्युत् चुहिन्छ । त्यो कुन ठाउँ हो, मलाई थाहा छैन । त्यो पनि रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।
सधैँका लागि लोडसेडिङमुक्त कहिलेदेखि हुनेछ ?
यो सरकारको प्रमुख लक्ष्य भनेकै लोडसेडिङ हटाउनु हो । त्यही जिम्मेवारी लिएर मैले प्रयत्न गरेको हो । लोडसेडिङ अन्त्यको लक्ष्य हासिल गर्न मैले दिनदिनै सचिव र कार्यकारी निर्देशकलाई झकझक्याइरहेको छु । उहाँहरू लागिरहनुभएको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि स्रोत चाहिन्छ । वैकल्पिक स्रोतका लागि पनि काम भइरहेको छ । स्रोत पर्याप्त बनाउने एउटा कुरा हो भने अर्को कुरा भएका स्रोतहरूको सही परिचालन गर्ने, अवैध व्यापार हुन नदिने, चुहावट हुन नदिने पनि हो । त्यसैले मन्त्रालय र प्राधिकरणले स्रोत विस्तार गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी छ भने अर्को उपभोक्ताको साथ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो । यति भइदियो भने अहिलेको लोडसेडिङ अन्त्यको अवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । तर, ढुक्क हुनूस्, काठमाडौँमा लोडसेडिङको तालिका भने फर्केर आउँदैन ।
काठमाडौँबाहिर जनता छैनन् र ?
बाहिरका उपभोक्ताले पनि के बुझ्नुपर्छ भने पहिलेको आठ घन्टाबाट दुई घन्टामा झारिएको छ । गुनासो गर्नेले सकारात्मक ढंगले पनि हेरिदिनुपर्‍यो । गुनासो गरिरहनुभन्दा पनि आशावादी पनि हुनुपर्‍यो । चाँडै नै त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।
विद्युत् प्राधिकरणको पुन:संरचना नगरी सुधार दिगो हुन्छ त ?
मेरो ३७ बुँदे योजनामै प्राधिकरणको पुन:संरचना पनि छ । त्यसमा एउटा संरचनागत पुन:सरंचना र अर्को वित्तीय पुन:संरचना पर्छ । दुवै किसिमले पुन:संरचना गर्नुपर्छ र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानुपर्छ भन्ने भनाइ हो ।
प्राधिकरणको त्यति ठूलो संरचनालाई नौ महिनामा सुधार गर्न सम्भव छ र ? त्यसमाथि चार महिना त बिती पनि सक्यो !
योजना र एक्सनले बदल्ने हो । काठमाडौँमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव रहेछ भन्ने त पुष्टि भयो । अहिलेसम्म बर्सेनि लोडसेडिङको तालिका दिने काम मात्र हुँदै आएको थियो । विचार, योजना र एक्सनलाई सँगै लगिएको खण्डमा परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । मुख्य कुरा जनताले निगरानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यो बनाएपछि मान्छेले गलत बाटो लिन सक्दैनन् । त्यसैले जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्, आज हुने रहेछ भने हिजो किन भएन भनेर ? तसर्थ, जनताप्रति उत्तरदायी प्रणाली बनाएपछि धेरै कुरामा सुधार सम्भव छ ।
प्राधिकरणभित्रको कर्मचारी राजनीतिले त्यस्तो सुधार गर्न देला ?
नेपालमा अति राजनीतीकरण समग्रमा समस्या नै बनेको छ । राजनीति चाहिन्छ । राजनीतिक रूपमा सचेत भएन भने काम लाग्दैन तर अति राजनीतीकरण जरुरी छैन । हरेक क्षेत्रमा यो समस्या विद्यमान छ । यो राम्रो होइन । यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनैपर्छ । ट्रेड युनियनको अधिकारको पक्षपाती हुँ म पनि । तर, उनीहरू आफ्नो सीमाभित्र बस्नुपर्छ । ताल्चा लगाउने र तोडफोड गर्न पाइँदैन ।
प्रसंग बदलौँ, ठूला परियोजनाहरूको प्रगति आशलाग्दो छैन नि ?
लगानी बोर्ड आफ्नो उद्देश्य अनुरूप अगाडि नबढेको सत्य हो । परियोजना ओगटेर बसेर बोर्डको उद्देश्य पूरा हुँदैन । उसको मूल उद्देश्य त विदेशी लगानी ल्याउने र ठूला परियोजना अघि बढाउने भन्ने थियो । तर, मन्त्रालय चुप लागेर बसेको छैन । जलाशययुक्त परियोजनाहरू निर्माण गर्न उत्पादन कम्पनी गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । आयोजना हेरी विभिन्न सहायक कम्पनीहरू बन्नेछन् । विदेशी लगानी र साझेदारीमा ठूला परियोजनाहरूको काम अघि बढाउनेछ ।
अर्को पाटो प्रसारण लाइनको समस्या पनि छ । चार सय केभीको प्रसारण लाइन भर्खर बन्दै छ । त्यस किसिमको पूर्वाधार धेरै चाहिन्छ । त्यसको काम पनि अघि बढाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि बेग्लै कम्पनी गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । विद्युत्को व्यापार गर्नसमेत बेग्लै कम्पनी स्थापना गर्ने योजना छ । त्यसको जिम्मेवारी भनेको यहाँको बढी भएको बिजुलीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने हुनेछ ।
अलिकति समसामयिक प्रसंग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्दा किन छापामार शैली अपनाउनुभएको ?
दर्ता किन भयो भन्ने त प्रस्ट नै छ । विधिको शासन, लोकतन्त्र स्थापित गर्न र राजनीतिक सर्वोच्चता कायम गर्न गरिएको हो, त्यो प्रस्ट नै छ ।
पारित गर्ने प्रक्रिया किन ढिलो त ?
राजनीतिक दलहरूबीच कुराकानीमा समझदारी नै छ । नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय नगरेका कारणले अलिकति ढिलो भएको जस्तो देखिएको हो । तर, कांग्रेस निर्णय गर्ने पक्षमै छ । संसदीय प्रक्रियामा गइसकेपछि आजको आजै फैसला गर्न सम्भव हुँदो रहेनछ । छलफल गर्दै, बोल्न चाहनेलाई बोल्न दिनुपर्ने भएकाले पनि प्रक्रिया केही लम्बिएको हो ।
महाभियोग पारित भएन भने नि ?
पारित हुनेमा शतप्रतिशत विश्वस्त छु । लोकतन्त्र र विधिको शासनका निम्ति पनि त्यो पारित हुनुपर्छ । समानान्तर अर्को राज्य चलेजस्तो देख्न नचाहने, भ्रष्टाचार बढेको देख्न नचाहने हो भने यो पारित हुन्छ । पारित हुनुहुँदैन भन्ने त कोही जनप्रतिनिधि पनि छैनन् । त्यसैले यो पारित हुन्छ ।
लोडसेडिङ बढ्दैन :…
चैत २ गतेदेखि लोडसेडिङ
‘दुई वर्षपछि तपाइँको
विद्युत् भार दुई घन्टा
Related ItemsBusinessdigital khabarEntertainmentInternationalJanardan SharmaNationalNepalNewsPoliticsTalkUrja MantriWorld
← Previous Story साथ दिनुहोस्, काठमाडौँ मात्र होइन देशभरिकै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सक्छौँ – भिडियोसहित
Next Story → ‘गफ र उखानले देश बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ’